Indlu ye studio yeChalet enegadi eValtellina
"I-Al Cancello Rosso" yi-chalet esandula ukulungiswa ngokuhlonipha iimpawu zokuqala zee-chalets zentaba, kodwa enezisombululo zangoku kunye nezisebenzayo zokunika intuthuzelo enkulu kunye negadi enkulu, indawo efanelekileyo kwabo bafuna ukuzola kunye nokuphumla. Kwindawo ecwangcisiweyo, kuba yimizuzu nje embalwa kude kuzo zonke ezona ndawo zintle nezinomtsalane: iSwitzerland kunye neValtellina ephezulu, iTirano, kunye neBernina Red Train, kunye neBormio, eneendawo ezithambeka zokutyibilika kunye nespas.
Emva kokuwela "isango elibomvu" ungena kwi-chalet, isanda kulungiswa. Isitudiyo somgangatho ophantsi sisisombululo esihle kwaye sanamhlanje, sinebhedi ephindwe kabini, ibhedi eyongezelelweyo yesofa kunye negumbi lokuhlambela elineshawa ebanzi. Indawo yokuhlala inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye ne-cooktop yokungenisa, ifriji kunye nemicrowave. Ipholile ehlotyeni kwaye ishushu ebusika, ine-fireplace ye-pellet yongeza ukufudumala kunye nentaba kwi-atmosphere. Isidlo sakusasa esizisebenzelayo, esinokuthi sonwabele ekuthuleni nasekuzimeleni kwegadi; indawo yokupaka kunye nokugcinwa kweebhayisekile kunye ne-skiing. Kwiincwadi zokulahla iindwendwe: okwethutyana endlwini. Kumatshini wokuhlamba wokulahla iindwendwe kunye nayo yonke into efunekayo ukucoca.
4.93 ·Izimvo eziyi-54
I-chalet ijikelezwe ngamaplanga kunye namasimi, kodwa, ngenxa yobukhulu obuncinci belali yaseLovero, isekufutshane neevenkile, iibhari zecuba, indawo yokubhaka kunye nevenkile encinci kodwa egcweleyo, kubandakanya neemveliso ezigqwesileyo zasekhaya.
Ndinika iindwendwe zam indawo kodwa ndifumaneka ngalo lonke ixesha xa zifuna